အရာ-bits အရင်ကဆိုရင်လက်ဝှေ့သတ်နေကြသည်။ မဆိုယှဉ်ပြိုင်အားကစားသမားလက်ဝှေ့ menne 3-လအတွင်းထကြာမှဒါဟာခွင့်ပြုမထားပေ။3ရိနာစွဲ။5ယှဉ်ပြိုင်ထဲမှာအရင်ကဆိုရင်များအတွက်တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးတိုက်ပွဲတွေလည်းအနိုင်ရဖို့လိုပါတယ် ...
Chelyabinsk ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဈေးပေါသည့်အားကစားရုံ၊ အေရိုးဗစ်၊ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ + ကျောင်းသားများအတွက်အထူးလျှော့စျေးများရှိသည့်နေရာမှာ Paradise အားဖြင့်သင်တို့ကိုဖိတ်ကြားရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
သင့်ရဲ့ biceps တိုင်းတာဖို့ဘယ်လို? တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးပြည်နယ်အတွက်? ငါသံဗူးများ၏ကြီးထွားမှုကိုခြေရာခံချင်တယ်။ အဓိကအရာကအမြဲအတူတူအခြေအနေတိုင်းတာသည်။ အများစုကတော့ကစိတ်အေးလက်အေးပြည်နယ်၌ပြစ်မှားမိသည်။ ဒါပေမယ့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ...
2 1 reset ဖို့ဘယ်လိုတစ်နေ့လျှင်ကီလိုဂရမ်။ ယခုငါစားရန်အဘယ်အရာကိုစားရန်လိုသလား? ပိုများသောမိုင်အကွာအဝေးအခုအချိန်မှာ 20 မိနစ် duaretiki ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေမကောင်းတဲ့အများဆုံးလျှင်မြန်စွာအပေါ်))) Pross ကိုကူညီပေးဖို့ရေဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မ ...
Expand လက်ဖျံစုပ်စက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီပါသလား ငါအရိုး၏တူညီသောပြဿနာ iespander သို့မဟုတ်မယူ neznaju ဤနေရာတွင်အလွန်ပါးလွှာဖြစ်ပါသည်ရှိတယ်?! လက်ကောက်ဝတ်နှင့်စုပ်, ဒါပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုဆိုးလို့မရပါဘူး ...
အဘယ်အရာကိုများနှင့်မည်သို့မည်ပုံနှင်းလျှောစီးဂျာကင်အင်္ကျီကိုဖျက်ပစ်ရန် ?? ဟုတ်ကဲ့ကအဝတ်လျှော်စက် Don'ts အတွက်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုလျှော်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး: ဆပ်ပြာကိုဆေးတဲ့အခါမှာ crumbly ကြောင့်ချွေးပေါက်ခုံဖိနပ်နိုင်ပါတယ်သုံးရန်, ကပါးလွှာသောအရောင်ချွတ်အရောင်တင်ကိုထိခိုက် add ...
နှင့်အကွာအဝေး 500 မီတာ Sprint ပါသလဲ သို့မဟုတ်ပဲ 400 သလော အားကစားကွင်း၏အားကစားသမားသည့် Sprint အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရသောအားကစားစည်းကမ်းများကို၏ Sprint စုဆောင်းခြင်း (မြန်နှုန်း running) ။ အကွာအဝေး၏အရှည် ...
မိန်းကလေးအတူတက်ဖမ်းရန်သင်ယူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? 1 ။ ရင်ဘတ်အဘို့အ pulldown စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်သငျသညျအထူး go ဘယ်မှာအားကစားရုံရှိလျှင်, အစားထိုးထိုနေ့၏ 3-12 မှတဆင့်အထပ်ထပ်၏34 စုံခေါင်း ...
Creatine သည်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး! လူသည်မိမိကိုမိမိထိခိုက်မှုမသောအမှားမှခန္ဓာကိုယ်၏ဤ raznomu- တုံ့ပြန်မှုပါ! ကောင်းသောကံ!)))) တစ်ခါတစ်ရံကြွက်တက်, ဝမ်းလျှော ... အစုလိုက်အပြုံလိုက်, အစွမ်းသတ္တိကိုခံနိုင်ရည်))) pobochki သတိထားမိကြဘူး ...
glutamine ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်စားတာလဲ။ Glutamine သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုတိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြွက်သားကြီးထွားစေရန်နှင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သည်။ အတင်းအကျပ်နိုင်ရန်တိုတိုကိုစားပါ ...
ကအားကစားသမားနှလုံး volume ထဲမှာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အရာကြွင်းသမျှမှာဤအကြောင်းကြောင့်နှေးသူတို့အား pulse မှန်ပါသလား? ဟုတ်ကဲ့, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမား, နှလုံးအရွယ်အစားနှင့် tachycardia တစ်ခုတိုးလာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ...
သေလွန်သောသူတို့သည်နှင့် deadlifts မဟုတ်ထို့နောက်ခြားနားချက်ကဘာလဲလျှင်အတူတူပင်များမှာ! ဆူမိုနပန်းဂန္: ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲနှစ်ခုအဓိကမျိုးရှိပါတယ်။ ကျဉ်းမြောင်းစွာ set ကိုခြေနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု, Classical တဏှာ (လုနီးပါး ...
ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုအားကစားရုံအတွင်းအစာအိမ်, ဖယ်ရှားရန်? ဝမ်းဗိုက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်: အားနည်းဝမ်းဗိုက်နံရံဝမ်းဟာ breastbone ထံမှစတင်သည်သော်လည်း။ အချိန်မှာတောင်အဆီကကြွက်သားအလွယ်ကူဆုံး spravitsyaTolsty အလွှာ (သင်နိုင် ...
1 လသေဖို့သတင်းစာတည်ဆောက်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? အမျိုးသားများအတွက်သောနေရောင်အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်း http://www.greathome.tk/ ဖော်ပြပေးသောအပေါ်ကောင်းတစ်ဦး site ကိုဖွင့်ကြည့်ပါ။ ငါတူအစီအစဉ်လုပ်ပေးလိမ့်မယ် ...
အားကစားသမားများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခု "ခန်းခြောက်" ကိုဘယ်လို
အားကစားသမားများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကို“ ခန်းခြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ဆဲအမှားတစ်ခုမှာအလွန်လျင်မြန်သော (သို့) အလွန်ပြင်းထန်လွန်းသောကယ်လိုရီဓာတ်စာကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အမှားတစ်ခုကအစွန်းရောက်အစားအစာဖြစ်သည်။
သတင်းစာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, အသက်ရှူနှင့်ဒါပေါ်မှာ။ N. ကိုယ်ထည် Podm ကုတျ, အသက်ရှုလျှော့ချ။ အသက်ရှူချောမွေ့ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါဓါးသွားထသွားကြဖို့စတင်မှီက tak.Podnimat အိုးအိမ်လုပ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏ ...
အဆိုပါဆီစက်ဘီးကွင်းဆက်? ကျနော်တို့ graphite ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကပ်လျက်နှင့်ဒါကြောင့်လိုအပ်သောနှင့်အထည်သောဖုန်နှင့်အခြားအကြောင်းကို။ ဖြစ်နိုင်သမျှဆိုဗီယက်လမ်း။ မည်သည့်ကားထဲတွင်ကစိမ်ကွင်းဆက်ကိုဖယ်ရှား ...
အဆိုပါကီထိုင်အဘယျသို့သနည်း py.Ona ပိုပြီး elastic ဖြစ်လာ * ကြွက်သား x ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် +5ကီထိုင် erektsii မှ + 20 တစ်တုံ့ပြန်မှု။ မဟုတ်မည်မျှထိုင်-ups မြည်းပေါ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် (ကောင်းစွာ, ထိုင်-ups လည်းတင်ပါးကိုချောက်ချားရမယ်) ဖြစ်ပါသည် ...
ironman ကောင်းသောပရိုတိန်းပါသလား whey ပရိုတိန်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအများကြီးပရိုတိန်းတကယ်အစာအိမ်ရယ်မ, ဒါပေမယ့်ရှိသမျှတို့ကိုငါလက်ျာဘက်ဖွစျကွောငျး, Nikita နှင့်အတူသဘောတူ! ထို့အပြင်သူနှင့် ...
ကြမ်းပြင်ပေါ်လိမ် technique ကို 1.Lyagte ပြုကြနှင့်တစ်ဦးညာဘက်ထောင့်မှာဒူးကွေးဖို့ကိုဘယ်လို။ ခြေဘဝါးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ သင်၏ဦးခေါင်းနောက်ကွယ်မှသင်၏လက်ကိုရယူပါနှင့်မျက်နှာကျက် 2.Sfokusiruyte မှာကြည့်ပါ။ 3.Sdelayte ...